Gantaal Casri ah Oo Haleelay Waqooyiga Talaabiib…Waxaa Soo Socda Ayaa Ka Daran | Xaqiiqonews
Gantaal Casri ah Oo Haleelay Waqooyiga Talaabiib…Waxaa Soo Socda Ayaa Ka Daran
Gantaal laga tuuray Marinka Ghaza ayaa haleelay goob ka tirsan waqooyiga magaalada Talaabiib oo caasimad u ah yahuudda, taasi oo noqotay horumar cusub oo kooxaha Falastiiniyiinta ay ka sameeyeen Awoodahooda xagga hubka.
Bisha Maarso waxa ay noqotay taariikh dahabi ah oo ay diwaangashadeen carabta, waxaana abaalka iska leh gantaalka cusub kaasi oo aan aheyn ciyaar ciyaar iyo wax la dhayalsan karo.
Gantaalkan ayaa ka dhuuntay raadeerada iyo qalabka difaaca cirka ee Israa’iil, waxa uuna gaaray hadafkiisa si heersare ah, taasi oo ka dhigan in gantaalkan cusub ay u furanyihiin albaabada, mana jirto goob ka caagan.
Gantaalkan Cusub ayaa wata magaca “Jacbari 80”, waxaana gantaalkan loogu magac daray Axmed Jacbari kaasi oo la dilay sanadkii 2012, gantaalkan ayaa gaari kara 120 km, waxaala sheegay in laga gamay magaalada Rafax oo dhacda koonfurta Marinka.
Gantaalkii Talaabiib ayaa “Af bilow” u noqonaya quraac dufin leh oo soo socota, waxaaba laga yaabaa in gantaalkan dartiis malaayiin reer Israa’iil ay raadiyaan gabaadyo cusub oo ay ku nabad helaan.
Waxaan ka soo tarjunay Cabdi-baari Cudwaan/Website-ka raialyoum